Myanmar Family Mail ကို အသုံးပြုနည်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Myanmar Family Mail ကို အသုံးပြုနည်း
မြန်မာမိသားစုမေးလ်စနစ်က ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်ထားတာမို့ ဘယ်သူမှ အကျွမ်းတ၀င် ဖြစ်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ရင်းနှီးသွားရင်တော့ သိပ်ကို မြန်ဆန် သွက်လက်တာ သေချာပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်နှေးတဲ့သူတွေလည်း သိပ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာမိသားစု အီးမေးလ်ကို သုံးရတာ အဆင်ပြေအောင် သရုပ်ပြပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ မြန်မာမိသားစု အီးမေးလ်ကို http://mail.myanmarfamily.org or http://www.myanmarfamily.org/mail နှစ်သက်ရာကနေ ၀င်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ကပုံက စ ကြည့်လိုက်ပါ။
၂။ မေးလ်ထဲကို ရောက်တဲ့အခါ မေးလ်ဖတ်မှာ ဖြစ်လို့ ဒီအောက်က ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ။
၃။ မေးလ်တွေ ဖတ်ပြီးလို့ မေးလ်အသစ် ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ button လေးတွေထဲက စာရွက်နဲ့ခဲတံပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါက " Create New Message " ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံမှာ ပြထားသလို ဖြည့်စွက်လိုက်ပါ။
၄။ မေးလ်မှာ ဖိုင်တွေ တွဲချင်ရင် အောက်က ပုံအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ။
၅။ မေးလ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ ဖြည့်စွက်ဖို့ ၊ ဘာသာစကား ၊ ဒေသစံတော်ချိန်တွေ ပြင်ဆင်ဖို့ အောက်ကပုံအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ။
၆။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အီးမေးလ်ကို မှတ်ထားချင်ရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ခုလောက်ဆိုရင် မြန်မာမိသားစု အီးမေးလ်ကို အသုံးပြုဖို့ အရမ်းလွယ်သွားပါပြီ။ ခုလို ပုံလေးတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သွားတာ ကိုအဲဗား ကျေးဇူးပါ။ သူ့ကိုမေးပြီး လုပ်လိုက်ရတာ။ ကိုအဲဗားရေ... ကျေးဇူးပါဗျာ။ မြန်မာမိသားစုဝင်အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 33 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဇရက်, ဇာနည်စိုး, ညီစေမင်း, ဓာတုကလျာ, ယွန်းယွန်း, ရာဇာ၀၀၉၅၁, ဦးအသေးလေး, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်မွှေး, အောင်ကိုခန့်, Aung Aung, AZM, blackNwhite, fairywin, green leaf, htun30, k k, komyintsoe, kyaw.s93, MayKyaw, minthike, minthumon, moemama2008, myintsoe, new-comer^girl, nnkpol, nyilinnge, phoetharlay, thureinsoe, zo
ပို့စ်2ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Myanmar Family Mail ကို အသုံးပြုနည်း
ကျွန်တော်ဝင်တော. login failed ဆိုပြီးပဲ ပြနေတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ tunnotepad အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, zo
Find More Posts by tunnotepad
ညီလေးက ဘယ်သူ့ဆီမှာ အကောင့်လုပ်ထားတာလဲ။ မေးလ်အတွက်က အကောင့်သပ်သပ် လုပ်ရတယ်လေ။ ဖိုရမ်အကောင့်နဲ့ ၀င်လို့မရဘူးလေကွာ။ အသိပေးချက်များ အောက်မှာသွားဖတ်လိုက်။ မေးလ်အကောင့် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, MayKyaw, minthumon, nyilinnge, phoetharlay, zo
14-09-2008, 11:31 PM
တည်နေရာ: Yangon, Myanmar
ကျွန်တော် http://ခwww.myanmarfamily.org/mail/ ကို ၀င်တာ login failed ဆိုပြီးပြနေပါတယ်။
user name ရိုက်ထည့်တော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲပေၞတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဗမာလိုပဲရွေးထားတာ။ အဲဒါနဲ့များဆိုင်သလား။
Let's make the Golden Landabetter place & share your wisdom @ MDCF (Myanmar Development Community Forum)
"AIDS isawar that no one wants to lose but no one yet knows how to win."
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဇော်လင်းဒွေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit ဇော်လင်းဒွေး's homepage!
Find More Posts by ဇော်လင်းဒွေး
14-09-2008, 11:49 PM
ကိုဇော်လင်းဒွေး ပြောပုံကြည့်ရတာ မြန်မာဖမ်မလီမေးလ် အကောင့် မဖွင့်ရသေးဘူးထင်တယ်။
မေးလ်အကောင့်မဖွင့်ဘဲနဲ့ ၀င်လို့မရဘူး ခင်ဗျ ။ အကောင့်ဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ကပို့စ်မှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, minthumon, nyilinnge, phoetharlay, zo
14-09-2008, 11:58 PM
Thank you very much Ko Aung Aung. Btw, What is PM? "အီးမေးလ် အကောင့်များကို အုပ်ချုပ်သူတဦးဦးထံ ပီအမ်ပို့ရပါမယ်။"
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဇော်လင်းဒွေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, minthumon, zo
15-09-2008, 08:35 AM
What is PM? "အီးမေးလ် အကောင့်များကို အုပ်ချုပ်သူတဦးဦးထံ ပီအမ်ပို့ရပါမယ်။"
PM means Private Messaging .(ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များ အချင်းချင်း စာပေးပို့နိုင်ခြင်း။)
ပုံမှာပြထားတဲ့ နေရာလေးကို နှိပ်ပြီးရင် PM ပို့ လို့ ရပါတယ်။
Last edited by tu tu; 15-09-2008 at 08:53 AM.. Reason: ပုံသေးနေလို့
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ wahgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, minthumon, phoetharlay, zo
မြန်မာမိသားစုအချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံရနိုင်အောင် ဖန်တီးရှင်များကိုလည်း
နောက်နောင်ကျရင် လိုချင်တာများရှိရင် အားမနာတမ်း တောင်ဆိုမှာပါ........
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်မောင်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, minthumon, zo
Find More Posts by မောင်မောင်လေး
14-12-2008, 11:41 AM
မေးလ် က၀ယ်ရတာလား အလကားရလား ပြောပေးပါဦးဗျာ ၀ယ်မယ်ဆိုဘယ်လိုဝယ်ရတာလဲ ခင်ဗျာ mail account က free ရတာလား ခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Tup Pi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Tup Pi ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Tup Pi
14-12-2008, 12:36 PM
အကိုရေ။ ဒီဖိုရမ်မှာ မေးလ်အပါအ၀င် မန်ဘာတွေ သုံးလို့ရတာအားလုံး free ပါဘဲ။ ဘာမှ ၀ယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာကြေးမှ ပေးစရာမလိုပါဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, ယွန်းယွန်း, လုလု, မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, blackNwhite, fairywin, minthumon, moekyal, nay nyo yi, nyilinnge, phoetharlay, zo
ပို့စ် 265 ခုအတွက် 557 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by tunnotepad
ဟုတ်တယ် နယူးလည်း အဲ့လိုဖြစ်တယ်
[Marquee][COLOR="Plum"]:9:ခင်မင်မှုရဲ့ အတိမ်အနက်က အသိအကျွမ်းကြာရှည်တဲ့အပေါ် မူမတည်ပါဘူး:9:[/COLOR][/Marquee]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ new-comer^girl အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by new-comer^girl
ကျနော် မေးကိုဘယ်လိုမှဝင်လို့မရလို့ပါ.... ၀င်လိုက်တိုင်း 404 Error နဲ့ဘဲတိုးနေလို့ပါ....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကိုကိုသီဟ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
17-03-2009, 03:59 PM
ညီလေးရေ- အကိုတို့ဆာဗာအခက်အခဲကြောင့် မေးလ်တွေ လောလောဆယ် သုံးလို့မရသေးပါ- အမြန်ဆုံးပြန်ရအောင် လုပ်ပေးနေတယ်- ဆာဗာပြောင်းထားတော့ မေးလ်တွေပါ-လိုက်ပြောင်းရတယ်- ဒါကြောင့် သည်းခံပြီးစောင့်ပေးစေလိုတယ်-
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇရက်, ညီစေမင်း, ယွန်းယွန်း, လူမုန်း, လေလွင့်မိုးတိမ်, minthumon, new-comer^girl, nyilinnge, phoetharlay, zo
အစဉ်အလာ ရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာမိသားစု အီးမေးလ် စနစ်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်လိုက်ပါပြီ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ MSN , Hotmail ရဲ့ စတိုင်လ်လေးနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အခြားသော စတိုင်လ်များကိုလည်း မိမိနှစ်သက်သလို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ မေးလ်အတွင်းက Setting တွေကို ကောင်းစွာ အကျွမ်းဝင်ဖို့ လိုက်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လွယ်ပါတယ်။ မေးလ်တွေ စတင်ပို့နိုင်ပါပြီ။ မေးလ်အကောင့် လိုချင်သူများ ကိုပိုင် ၊ ကျွန်တော် ၊ ရဲအောင် ၊ မတူးတူး ၊ အောင်အောင် တို့ထံသို့ သတ်မှတ်ထားသော အချက်များအတိုင်း စာချွန်လွှာပေးပို့၍ တောင်းခံနိုင်ပါပြီ။ အီးမေးလ် ရရှိပြီးသူများသည် http://mail.myanmarfamily.org သို့ သွားရောက်အသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ယခင်ဆာဗာအဟောင်းမှ အီးမေးလ်များ ပြန်မရ၍ ယခင်သုံးစွဲဖူးသူများလည်း အသစ်မှတ်ပုံတင်ပေးကြပါရန်...။
အောက်ပါအသင်းဝင် 24 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဆန်းမောင်, ဇင်ယော်, ယွန်းယွန်း, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ဘိုတောက်, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, နိုဝင်ဘာ, Aung Aung, bonge, fairywin, konaung, kooo333, MilkyWay, minthumon, new-comer^girl, nyilinnge, peacelover, phoetharlay, tu tu, unique, zo
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 31 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
လိုအပ်သောအချက်များ ဆိုတာကို သိအောင် ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသွားကြည့်ရမလဲခင်ဗျား
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ khunsoemoethu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by khunsoemoethu
22-05-2009, 07:39 PM
၄။ password ကို ပြောတာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, နိုဝင်ဘာ, Aung Aung, hellboy, minthumon, phoetharlay, zo